Izimvume ye SRO ekuklanyweni. inhlangano enemitheshwana emkhakheni nemiklamo yokwakha. izinhlangano ezingenzi nzuzo
Ibhizinisi, Izinhlangano ezingenzi nzuzo
Uyini CPO? Kuyinto segama ukuthi imele inhlangano enemitheshwana. Ngokuvamile, lezi izinhlangano akhiwe inqwaba amalungu bese uvumele osomabhizinisi kanye nabahlinzeki ukuthatha indima lokuphatha umsebenzi, okuyinto ngokuvamile eyenziwa isimo. Ngo nezinhlangano ezifana presentedin izinhlelo eminikelo ezahlukene njengoba ubulungu kanye umshwalense, futhi ubukhulu izinkokhelo kuzoncika ezintweni eziningi, ezifana uhlobo umsebenzi, ukubaluleka izivumelwano, kushuba ingozi lomsebenzi, kanye injongo Ukufakwa amathuluzi.
Yiziphi izinhlobo kudinga ubulungu enhlanganweni enemitheshwana? Ngokuvamile ezifana imisebenzi edinga SRO: ukuklanywa, ukwakhiwa, ukulungiswa, nomsebenzi wesondlo, njll ...
izinhlangano Self-ukulawulwa kanye nokunikezwa kwezimvume: umehluko
Ukuze iningi imisebenzi ehambisana ukwakhiwa, ukulungisa, umklamo, nokunye. E., adingekayo imvume ekhethekile kusuka kuhulumeni. Kodwa mikhuba kukhona yokuthi uhulumeni kancane kancane belahla kwamalayisense uthumele abanye amandla ayo izinhlangano enemitheshwana. Lolu shintsho bavunyelwe ukunciphisa inani izindleko ezahlukene kanye ukwandisa izinga lokuvikeleka amakhasimende imisebenzi ehlukahlukene. Ukuvikelwa indlela ezihlelwe ngayo isimiso kahle elula - amalungu SRO ukukhiqiza izimali ezithile ubulungu, kanye izinkokhelo umshwalense, kuye ngohlobo yomsebenzi. Endabeni ukubulawa badlale imisebenzi ngomunye amalungu enhlanganweni ikhasimende inxephezelwa encenyeni ukulahlekelwa. Isinxephezelo livela Isikhwama umshwalense. Iminikelo futhi ukuya nezindleko zokuphatha, ukusekela ezihlukahlukene izinsiza Inthanethi, kanye nezindleko ezifanayo. UMbuso awuzange ukuthwala imithwalo yemfanelo enjalo abanama ilayisensi, waya kuphela emahlombe umculi, okuyinto abakwazi ngokuzimela amboze ukulahlekelwa njalo.
Ukuze wenze izinhlobo eziningi umsebenzi, inkampani Executive iyadingeka ukuba inhlangano self-elawula. Kudingeka nokuba bavunyelwe SRO ekuklanyweni. Lokhu kwenziwa ngokuyinhloko ngenxa kushuba umthwalo ezihlobene nale mkhakha womsebenzi. Ngaphandle ubulungu nezinhlangano ezifana ngokufana iningi umsebenzi design ngeke kwakufanele kubhekwe njengokungekho emthethweni futhi ifemu enza inkontileka, singasetshenziswa iziyisikhombisa zokuphatha, kuze izinhlawulo lobugebengu otvetstvnnyh abantu.
Ngaphezu kwalokho, kunezinye izizathu eziningana ukuthi kufanele uthole yokuvuma SRO. Design, nezinye izinhlobo zomsebenzi adinga indlela obhekene kubhizinisi. Ngakho-ke, abalingani bakho abanamandla kanye namakhasimende kungenzeka ukuba ngithande khona idokhumenti inkampani yakho eqinisekisa ukuthi ilungu SRO. Ngaphezu kwalokho, izinhlangano enemitheshwana ekuklanyweni uzokwazi ukukunikeza kwesekelwa lolwengetiwe, okuzokwenziwa ezalotshwa kukho.
Lezi zindlela eziyinhloko ukuba abe ilungu inhlangano enemitheshwana futhi sithole yokwemukela SRO (design), kuyoba kwale mibandela elandelayo:
Ukuba khona ochwepheshe okungenani ezintathu ezifanele imfundo ephakeme nomsebenzi nakho kweminyaka emithathu (noma abantu abahlanu secondary education ezikhethekile futhi onesipiliyoni seminyaka emihlanu).
Esibhaliwe ubufakazi isikhathi ngokuhambisana nomthetho waseRussia.
UMzila yokuqeqeshwa ehlukahlukene intuthuko professional ngemuva kokunikwa etholwe design yokuvuma SRO.
Sekukonke inqubo ukubusa kulawulwa umsebenzi okhethekile wezazi, oyingxenye ye inhlangano enemitheshwana. Ngaphezu kwalokho, kuye ngohlobo lomsebenzi, kanye nezimfuneko ezithile SRO zingase zehluke, kodwa empeleni ayefana - izinkinga otstutstvie emaphepheni ukubhalisa, kanye ukutholakala inani elidingekayo abasebenzi abaqeqeshiwe ngaphakathi ngokuqinile.
Yeka ukuthi kuyinto ukwamukelwa CPO umklamo: amanani entry
Amanani zihlukile. Kuye inhlangano oyikhethile, kwenkululeko imisebenzi edingekayo Association (SRO-ukuklanywa, ukwakhiwa, nokunye. D.), Indawo Geographical nezinye izinto, izindleko ukungena zingahluka. Ngaphezu kwalokho, kukhona ubulungu izimali, okuyinto kungaba futhi ehlukile.
Ngakho, singakanani iyona SRO yokuvuma umklamo? Ngokwesilinganiso, usomabhizinisi kumele kube phakathi 150 000 kuya ku-300 000 ukuze lifake izimali esikhwameni isinxephezelo, futhi kulesi simo, ngezinye izikhathi ukunikeza izitolimende wonyaka. Futhi, imali yokungena, okuyinto zokhahlamba kusuka ruble 5 izinkulungwane 70. Kwangathi khona, kanye nezinye izimali. Ngokwesibonelo, njalo ngenyanga Imali ubulungu, kuba ngokwesilinganiso elilingana ruble 5000.
SRO umklamo: izinhlobo zomsebenzi
Ngokuvamile, uhlu amasevisi, ukuqhuba esidingeka ukuba ilungu lenhlangano i-enemitheshwana, kuyinto ehluke ebanzi. Lokhu kungaphezu eziyishumi izinhlobo zemisebenzi ehlukene ngaphakathi SRO umklamo. Izinhlobo umsebenzi zihlanganisa:
(T master izinhlelo kanye nezinhlelo zokuxhumana. D.) Imisebenzi ehlobene kusakhiwo wesabelo umhlaba.
Imisebenzi ehlobene nokwakhiwa kwezakhiwo noma izikimu.
Ukulungiselela lwangaphakathi imibhalo uhlelo izinto (Ukushisa, ukuxhumana, indawo elawula uhlelo, igesi).
Izinhlelo zangaphandle amanethiwekhi (nezokuxhumana, Ukushisa, ukupholisa nokunye. D.).
Sebenza on the izixazululo zobuchwepheshe (izindlela ezahlukene ukwakhiwa noma ukuthuthukiswa futhi izinqumo Ukukhetha kwezinye izindawo).
Ukudalwa a imibhalo ekhethekile ezihlobene eziphuthumayo ahlukahlukene, izinto eziyingozi, nokunye. N.
Inventory amaphrojekthi ezihlobene nokwakhiwa dolobha, ukulungiselela lusebenza ku Obhekela Division noma Demolition.
amaphrojekthi okuthuthukisa ezihlobene nokuvikelwa kwemvelo.
Projects ezihlobene nomlilo ukuphepha.
Dala imibhalo project.
Ngaphezu le misebenzi, uhlu tolerances SRO umklamo kungafaka phakathi kweminye imisebenzi.
Iningi predrinimateley uzame ukubona kuzuze wonke, futhi cishe uzibuze ukuthi ungazuza ubulungu enhlanganweni enemitheshwana, noma-ke kuzodala imicikilisho kakhudlwana futhi imithwalo engadingeki. Nokho, ngaphandle CPO nawe nje ngeke isebenze ngokomthetho, futhi uzibeka futhi ibhizinisi lakho engozini.
Nokho kukhona usenhlanhleni. Namuhla, kunamabandla SROs ahlukahlukene amaningi kangaka. Kukhona izinhlangano lesifunda kanye isizwe-wide, izinhlangano zendawo, kanye nalabo abangamthandi libeke ngokwabo ngokwendawo. Kahle abakhethiwe inhlangano enemitheshwana iminyaka eminingi ukukunikeza ukwesekwa, okuyinto siyofezwa ngempela izinto eziningi. Unganikeza iqhaza imincintiswano ehlukahlukene kanye amathenda, futhi ezihlukahlukene kwempahla yomphakathi. SROs futhi ukweluleka amalungu ayo ezindabeni jikelele kanye zomthetho. Noma, ngokwesibonelo, ukusiza ukuxazulula izingxabano nekhasimende, uma izimangalo ngazo zingamanga.
Kwenzekani uma usebenza ngaphandle kokujoyina SRO
Yenza umsebenzi design ngaphandle iqhaza enhlanganweni enemitheshwana kakhulu sidangele. Imithelela Executive yomnikazi inkampani, kanye amanye amalungu ayo kungaba ezingezinhle kakhulu.
Njengoba ojwayelekile, uhlu izinkinga ezingaba khona idumela ngeke kuphela zibe futhi eziningi izinhlawulo, kodwa futhi kungenzeka abhekane izinhlawulo lobugebengu imisebenzi yebhizinisi emthethweni, kanye nezinye izihloko Amakhodi Criminal kanye Administrative we Russian Federation. Zivela lokhu kusobala ukuthi ukuvuma SRO ku umklamo ekusindiseni inkampani abangelwa yisisindo zezinkinga engadingeki.
Isibopho umsebenzi ngaphandle yokuvuma SRO
Kulokhu, zonke izinto kuzoncika isimo esicacile, imiphumela ingaba onomoya omnene kakhulu kunezinye endabeni ukungabakhathaleli nhlobo ubulungu enhlanganweni enemitheshwana. Imiphumela yokuthululwa unswinyo elandelayo kungabandakanya:
izinhlawulo abahlukahlukene kanye nezinhlawulo zokuphatha.
Invalidation izinkontileka, ukulahlekelwa okukhulu isikhathi.
Inhlangano oMkhulu ukuphuca yobulungu inhlangano zokuzilawula noma abeke unswinyo ahlukahlukene kwezigwegwe, kuye ngokuthi isimo.
Ngokusekelwe kulokhu okungenhla, akunandaba ukuthi iphrojekthi inkampani noma enze eminye imisebenzi. ephephile Better - isicelo inhlangano enemitheshwana futhi sithole yokwemukela SRO ekuklanyweni.
Carnegie eMoscow Centre kanye nemisebenzi yayo
Isibikezelo Kumahhala Basketball, Ezemidlalo Izibikezelo
SRO - indlela empumelelweni
Amafomu enhlangano nezinhlaka zomthetho izinhlangano ezingenzi nzuzo. Ngokungafani kulezi zikhungo ezinhlanganweni kwezohwebo. Inhlangano zokukhiqiza ngesikhathi ibhizinisi
A izimfihlo ambalwa, indlela thunga isiketi kwisitezi nge band nokunwebeka
Amazing Guangzhou: nokuzwa, umlando, amathiphu zabahamba
Sumac: zokutshala nokunakekela, ukulima kanye zizalela
Inkosi eFrance Charles 6: uyahlanya ungabantu abayiqembu abaphethe isiphetho esidabukisayo
Nokia Asha 501 yocingo: ukubuyekezwa, izincazelo, Ukucaciswa
I-non-contact mpi - ngokoqobo ku ezingeni ezinganekwaneni
Alstroemeria ezinhle. Ukulima futhi Ukunakekela
Pistol IL-71: izici lobuchwepheshe. Pistol IL-71: idivayisi